Xiaomi na-atụgharị uche n'echiche ya na ihuenyo 'nsụda mmiri' | Gam akporosis
Kedu ihe bụ 'Waterfall Screen' nke Xiaomi Concept: ịkwaga na mobiles na-abịa n'ihu
Xiaomi ebipụtawo vidiyo na-egosi echiche ọhụrụ banyere ekwentị yana 'Waterfall screen' nke bụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi ahụmịhe ọ na-enye na vidiyo ahụ.
Ọ bụghị nke mbụ ya Otu echiche na-eme ka anyị nwee ihe ijuanya na mgbe ahụ anyị ga-ahapụ mmanụ a honeyụ na egbugbere ọnụ na-amaghị ihe ọ bụla ọzọ banyere ya; anyị nọ na echere LG Rollout, ma mgbe ihe mere na ụlọ ọrụ Korea... Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Xiaomi amaworị iju anyị anya afọ gara aga na na «niile na ihuenyo».
1 Inweta ngosipụta rue oke
2 Kedu ihe bụ 'Waterfall Screen' nke Xiaomi.
Inweta ngosipụta rue oke
Este ọhụrụ ihuenyo echiche na-ewe cornering ọzọ larịị. Ọ dị ka a ga - asị na anyị gbatịrị ogwe ọnụ ọnụ nke anyị hụrụ n'ọtụtụ ụdị Samsung Galaxy nke mere na ọ ga - ekwe omume ịgbanye ihuenyo ahụ. Ọ naghị eru ókè ndị ahụ, ma ọ bụrụ na anyị dinara ngwaọrụ ahụ ma lee ya anya n'akụkụ, anyị nwere ike ịhụ ka mmiri si aga; na nke a video ha jiri ma ọ bụ animated akwụkwọ ahụaja.
Ọ bụ ebe a? Ihe omuma ohuru nke Xiaomi nwere ihe nlere anya na akuku anọ ya n’enweghi uzo ozo!
Ahụwo m ma metụ ezigbo ngwaahịa ahụ aka, enwere m ịsị… ụdị ihe a nwere ike ịbụ omume ọhụrụ. pic.twitter.com/BK6A8Zv0EE
- Agatha Tang (@aggasaurus) February 5, 2021
Anyị na ihe yiri echiche nke Mi Mix Alfa nke afọ gara aga nke mere na ihuenyo Cascade a na-ekpuchi akụkụ 4 nke mobile. Anyị makwaara banyere echiche a kemgbe afọ gara aga n'April mgbe Xiaomi nwere ikikere ya maka ekwentị nwere ụdị ihuenyo mmiri, yana ọbụna igwefoto n'okpuru ihuenyo ahụ.
Anyị ga-abụ onye na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke dị n'akụkụ nkuku oge anyị tụrụ anya. Ọ bụ ugbu a mgbe Xiaomi ewerela netwọk mmekọrịta ndị China Weibo bipụtara vidiyo na nke nwere ike ịhụ echiche site na echiche niile nwere ike ịbụ anyị wee malite ịmụrụ anya na-eleba anya na nkọwa ya ma chee ahụmịhe ọ ga - abụ iji ya.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo, na Anyị na-akwado ka ị hụ ya ugbu a ka ị chọpụta banyere nnukwu echiche aNgwaọrụ ọhụrụ a enweghị bezels, kama nke ahụ, ọ na-ewere akụkụ gbagọrọ agbagọ ruo n'isi iji kpuchie akụkụ anọ ahụ.
Dịka ihe ngosi egosiri na afọ gara aga, echiche Xiaomi a yiri ka ọ dị iji ụdị MIUI gbanwere, Omenala na oyi akwa nke ụlọ ọrụ China maka igwegharị ha. Anyị na-ekwu na gbanwetụrụ n'ihi na dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, ọkwa ọkwa na ọkwa dị n'akụkụ.
Anyị nwekwara ike lee otú anyị si ahụghị bọtịnụ anụ ahụ n'akụkụ ya, n'ihi ya, ha ga-enwe mmetụta nke nrụgide ka anyị wee chee ihu na-aga n'ihu na-enweghị bọtịnụ anụ ahụ na nke ihuenyo kpuchiri akụkụ 4 niile. Nanị na-akpali akpali.
Kedu ihe bụ 'Waterfall Screen' nke Xiaomi.
Na-akwụsị, anyị nwere azụ igwefoto igwefoto nwere otu igwefoto na ihe bụ flash maka foto. Mana ihe hapụrụ anyị ntakịrị ntakịrị bụ ihu mmiri nsụda mmiri na nke Xiaomi chọrọ ịnyekwu ozi na onyonyo nke ihe nkwado ndị ahụ.
Dị ka onyinyo ahụ si dị, eji ihe eji eme ihe n’ile mara aru ọ na-enweghị ụdị ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla. Ihuenyo a nwere nkọwa zuru ezu na n'akụkụ ya ruru 88 Celsius, na Xiaomi na-etu ọnụ na ọ na-eji ọtụtụ ọganihu dị mkpa na ikike ikuku nke iko na laminating technology. N'ezie, dịka a na-ekwu na otu teas ahụ, Xiaomi bịara ime patenti 46 na mmepe ya.
Dị ka ọ bụ echiche, anyị na-anọgide na-atụ anya nke otú ọ dị adị n'ezie iburu mobile ya mere futuristic ruo ụbọchị anyị taa; batrị oge, anwụ ngwa ngwa, ihe na-ekpuchi anyị ga-etinye, wdg, wdg.
El Xiaomi ohuru “Waterfall” gosiputara echiche ihe n’ile Site n'onwe ya, ugbu a ichere ma ọ bụrụ na otu ụbọchị, anyị ga-enwe ya n'aka iji nwee ọ thatụ ahụmịhe nke ngbacha ihu na oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kedu ihe bụ 'Waterfall Screen' nke Xiaomi Concept: ịkwaga na mobiles na-abịa n'ihu
United States kwadoro na Huawei ga-aga n'ihu na-enweghị ọrụ Google
Nweta burgers ma kwụsị veganism na No More Veggies